Hadiyad Aroos 'No Show' - Fikradaha Ugu Fiican | Bezzia
Hadiyada arooska ' xaadirid la'aan': fikradaha ugu fiican
Susana godoy | 16/06/2022 16:00 | Aroosyada
Haddii aad ka fekereyso inaad bixiso hadiyad aroos 'no-show' sababtoo ah run ahaantii ma awoodid inaad ka soo qaybgasho, ka dib waxaan ku dhaafin fikrado taxane ah oo qumman.. Haddii lafteeda mararka qaarkood ay tahay xoogaa madax-xanuun ah si aad uga fikirto waxa la siinayo haddii aan aado aroos, liddi ku ah, waxay sidoo kale noo keentaa adduunyo shaki leh. Dabcan waxaan dooranay doorasho qumman.
Wax walba waxay ku xirnaan doonaan haddii aad wax badan ama in yar ka ogtahay dhadhanka lamaanaha. Sababtoo ah had iyo jeer waa fikrad wanaagsan in la toogto waddo noocaas ah. Laakiin haddii aysan kugu dhicin, ha werwerin sababtoo ah waxaa jira fikrado aad ka dooran karto. Maxaan siinayaa haddaanan ka qaybgalin aroos? Waa mid ka mid ah su'aalaha la maqlo maantana waxaad heli doontaa jawaabo kala duwan.
1 Hadiyada arooska ' xaadirid la'aan': sanduuqa khibradaha
2 Bixi qaar ka mid ah waxyaabaha daruuriga ah
3 Baakidh shakhsiyeed oo dhalooyin ah
4 Yaabka quraacda guriga
5 Faahfaahinta qurxinta
Hadiyada arooska ' xaadirid la'aan': sanduuqa khibradaha
Hubso inaad horeyba u ogtahay sanduuqyadaas la mid ah luminta khibrad gaar ah. Dhinaca kale waxaa jira kuwa aad dooran kartaa habeen ama laba, iyo sidoo kale quraacda ama xitaa guddiga kala bar. Intaa waxaa dheer, meelaha loo aadi karo waxay noqon karaan kuwo aad u kala duwan oo markan waxay noqon doontaa in lammaanaha ay go'aansadaan meesha. Habeennada huteelka ka sokow, waxa kale oo jira khibrado isboorti, oo ay ku jiraan daawaynta ama awoodda dhadhaminta cuntooyin taxane ah iyo xitaa booqashooyin mawduucyo badan leh. Waxaa jira fikrado aan dhammaad lahayn, markaa waa inaad doorataa mid ku habboon dhadhanka arooska iyo arooska. Si aad isu dheelitirto lacagta aad maal galinayso, ka fikir badhkii aad bixin lahayd haddii aad aado arooska. Waa in lagu siiyo fikrad!
Bixi qaar ka mid ah waxyaabaha daruuriga ah
Marka saaxiibtinimadu ay tahay dhibic aad ku jirto, waxaad had iyo jeer dooneysaa inay xusuustaada kugu hayaan maalintaas gaarka ah. Sidaa darteed, Waxaad bixin kartaa kala badh ka mid ah waxyaabaha ay tahay in aroosadda ama aroosadda ay iibsadaan. Tusaale ahaan, xulafada, bouquet ama wax la mid ah. Waa hab lagu maalgeliyo lacagta aad siin lahayd ama laga yaabo inaad ku iibsanayso faahfaahin kale oo aanay aad ugu baahnayn. In kasta oo mudnaanta ay na siin karaan, hubaal markay ku hadlaan waxay awoodi doonaan inay fahmaan.
Baakidh shakhsiyeed oo dhalooyin ah
Hubso taas meherka ka bacdi, oo marka ay ka soo galaan bisha malabka, waxay kuugu yeedhi doonaan guriga si aad u xasuusato maalinta weyn. Markaa, waxba kama roona inaad siiso xidhmo khaas ah oo khamri ah ama cava ah. Waxaa jira kuwa sidoo kale keena laba cabitaan oo dabcan waxay noqon kartaa faahfaahin qumman. Xitaa muraayadahaas waa la dhejin karaa oo dhejis fiican oo leh sawirka arooska ayaa lagu dhejin karaa dhalooyinka. Maanta waxaa jira shabakado badan oo daryeela. Markaa iyada oo loo marayo barnaamijyo fudud waxaad ku samayn kartaa iyada oo aan dhibaatooyin waaweyni jirin.
Yaabka quraacda guriga
Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn hadiyad sidaan oo kale ah, laakiin waa la yaab fiican. Si kale haddii loo dhigo, marka aan ka hadalno hadiyadda arooska 'ka qaybgalka', waxaa la bixin karaa sababo kala duwan. Mararka qaarkood sababtoo ah ma tagi karno sababtoo ah qaar ka mid ah ballanqaadyada kale, qaar badan oo kale sababtoo ah arrimo dhaqaale. Markaa, qof kastaa waa inuu la qabsado miisaaniyadiisa. Sidaa awgeed la yaab iyaga oo shaqaaleysiiyay mid ka mid ah quraacda gaarka ah ee ay guriga ku qaadan doonaan iyada oo aan lamaanuhu ogayn, waa tilmaan fiican oo ka dhigi doonta mid aad u xiiso badan..
Dhamaadka, waxaa laga yaabaa inaan ku dhacno fikradaha ugu qadiimiga ah, laakiin waa inaanan dhinac uga tagin taas. Haddii aad qurxinayso gurigaaga iyo haddii kale, faahfaahinta qurxinta waxay had iyo jeer noqon kartaa doorasho wanaagsan. Qaar ka mid ah rinjiyeynta ama saacada derbiga, iyo sidoo kale nalalka yaryar Miisaska sariirta. Jaakadaha jaakadaha ee aagga laga soo galo sidoo kale waa ikhtiyaar qiimo leh iyo dabcan, saxaarad si ay quraacda ugu qaataan sariirta. Maxaad inta badan bixisaa marka aadan aadin aroosyada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Aroosyada » Hadiyada arooska ' xaadirid la'aan': fikradaha ugu fiican
Meel bannaan oo shakhsi ah ee xiriirka jacaylka
Fikradaha lagu isku daro alaabta hore iyo kuwa casriga ah